Fananganana trano fivoahana etsy Tsimbazaza : MANAO AMBOLETRA INDRAY RY LALAO RAVALOMANANA -
AccueilVaovao SamihafaFananganana trano fivoahana etsy Tsimbazaza : MANAO AMBOLETRA INDRAY RY LALAO RAVALOMANANA
Fananganana trano fivoahana etsy Tsimbazaza : MANAO AMBOLETRA INDRAY RY LALAO RAVALOMANANA
15/02/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tafatsangana ankehitriny ny tetikasa novolavolain’ny avy amin’ny kaomina Antananarivo renivohitra izay tarihin’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, efa norarana anefa izy ireo tamin’izany saingy nodian’izy ireo tsy hita ny fampitandremana avy amin’ny minisitera misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana izay nalefa tany amin’ny kaomina ny faran’ny volana Janoary teo. Tsy zakan-dRavalomanana mivady mihitsy ny didy nivoaka tamin’ny alalan’ny filan-kevi-panjakana mahakasika ny tany izay nifanolanan’izy ireo sy ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany tetsy Antanimbarinandriana. Nahazo ny fandresena ireo ankizy maro be izay nangataka fotodrafitrasa, ka tsy nahazo rariny manoloana ny filan-kevi-panjakana ny CUA. Ny tombontsoan’ny vahoaka anefa no katsahina amin’ny alalan’ny fananganana fotodrafitrasa fa tsy ny tombontsoan’olon-tsotra.
Taorian’ity raharaha ity dia mifampihenjana indray ny tady eo amin’ny M2PATE sy ny CUA mahakasika ny fananganana trano fivoahana etsy Tsimbazaza. « Tsy manakana ny fotodrafitrasa izahay akory fa tsy mety ny toerana nametrahana ny fotodrafitrasa, ka antony nanomezana ny taratasy fanoherana » hoy ny minisitra misahana ny tetikasan’ny Filoha sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana, Narson Rafidimanana. Eo anelanelan’ny tsenan’ Avaradoha sy ny lalana hifamezivezen’ny fiara no misy ity fotodrafitrasa ity. Efa nisy ny taratasy fanoherana nalefan’ny M2PATE an’ny CUA tamin’ny fiatombohan’ity volana ity saingy mbola tsy manaiky ny CUA fa dia manao jadona tsotra izao ny an’ny CUA. Vinavinain’ny CUA tokanana atsy ho atsy moa ity fotodrafitrasa ity, hiaraha-mahita anefa fa manembatsembana ny fifamezivezen’ny mponina amin’ny andavanandro ny toerana misy ity fotodrafitrasa ity, maro ireo mpivarotra manodidina, eo ihany koa ny toerana izay tsy tokony hametrahana fotodrafitrasa toa izao mihitsy. Mihenjana hatrany moa ny tady eo amin’ny sampandraharaha roa tonta, indrindra manodidina ireo fotodrafitrasa maro eto Antananarivo.
Nitondra fanazavana misimisy kokoa ny amin’ny tokony hampiasana ny masomboly amin’ilay vary safiotra antsoina amin’ny teny baiko “riz hybride” ny minisi-panjakana misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana, Rivo Rakotovao. Tamin’izany no nilazany fa fanamby goavana ...Tohiny